Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee TELESOM oo Dib u Casriyey Ku Samayn Doonta Garoonka Kubadda Cagta ee Hargeysa Stadium | #1Araweelo News Network
Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee TELESOM oo Dib u Casriyey Ku Samayn Doonta Garoonka Kubadda Cagta ee Hargeysa Stadium
Hargeysa (ANN) Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee TELESOM ayaa maanta shaaca ka qaaday inay dib u casriyeyn casri ah ku samayn doonto garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium, waxaanay ka shaaciysay munaasibada ka qabsoontay maanta garoonka.
Munaasibaddan lagu shaacinaayey mashruucan shirkadda TELESOM ku casriyeynayso garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb-galay Wasiirka Ciyaaraha Somaliland Md. Axmed Cabdi Kaahin, Agaasimaha Guud ee wasaaradda Ciyaaraha, Agaasime Waaxeedyadda Wasaaradda iyo Masuuliyiinta Shirkadda TELESOM.
Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee Shirkadda TELESOM Maxamed Cabdi Darbo oo ka hadlay munaasibadda ayaa ugu horayn u mahadnaqay wasiirka Wasaaradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha, Agaasimaha Guud iyo Agaasimyaasha Waaxaha kala duwan ee Wasaaradda. Md. Maxamed Darbo xukuumadda Somaliland ku amaanay gaar ahaan madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo horumarka iyo rooga cagaaran ee la dhigay garoonka kubadda Cagta ee Hargeysa Stadium, kaasi oo uu sheegay inuu la jaanqaadayo garoonadda casriga ah ee dalalka jaarka ah ka jira.
Md. Darbo ayaa ka waramay xidhiidhka ka dhaxeeya wasaaradda ciyaaraha iyo shirkadda TELESOM waxaanu yidhi, “Shirkaddan TELESOM oo ka mid ah shirkadda wadanka ka shaqeeya, runtiina ah shirkadda umadda Somaliland ay wadda leedahay, isla markaana ah shirkadda u hiilisa dhalinyaradda ayaa waxaa xil naga saaran yahay arimaha muhiimka ah ee ciyaaraha oo aanu qayb laxaadle ka qaadano. Wasaarada ciyaaraha oo runtii aanu xidhiidh dhow leenahay muddo dheer laga soo bilaabo 2001 ilaa hadda oo Siligaa aad hadda arkaysaan isagoo garoonku baaba’san yahay ayey shirkaddu ku xidhay waxaanu doonaynaa maantana in aanu qayb laxaadle ka qaadano”
Agaasimaha Qaybta Horumarinta Arimaha Bulshadda ee Shirkadda TELESOM Md. Cabdiwahaab Maax ayaa sharaxaad ka bixiyey in isbadalka lagu sameeyey garoonka uu ku dhiiri galin doono dhaliyaradda inay jidhkooda iyo maskaxdooda dhisaan. Md. Maax ayaa sheegay shirkadda TELESOM waxa ay tahay, waxaanu yidhi, “Shirkadda TELESOM haddaanu nahay waajib baa naga saaran ummaddayadda aanu la shaqayno ee aanu ka shaqaysano. Waa shirkadd umaddu wadda leedahay oo sida garoonkaa qarankani u leeyahay oo ay Somaliland u waddaagto qaranimadda sidoo kale shirkaddani waa shirkadda ay wadaagaan ummadda Somaliland, tuulo kasta oo dalka ku taala waxaad ugu tagaysaa qof shirkadda saami ku leh, waa shirkadda Qaranka oo dhani wadda leeyahay”
Agaasime Cabdiwahaab Maax ayaa sharaxaad ka bixiye nooca casriyeynta ah ee shirkadda TELESOM ku samayn doonto garoonka kubadda cagta muddo bil iyo labaateeye maalmoo gudaheeda waxaanu yidhi, “Waxaanu maanta halkan iclaaminaynaa in aanu garoonka ka qaban doono hawlo ay ugu horayso gidaarkaa bariga inagaga soo jeeda oo dib u dhis dhamaystiran lagu samayn doono sidoo kalena dusha lagaga xidhi doono taar iyo biro, shubna dusha lagaga shubi doono si looga ilaaliyo in looga soo dhaco iyo si amaanka garoonka loo suggo. Markaa dhinacaa bari dhamaanteed waanu adkayn doonaa dhisme qurux badan oo shabag leh ayaanu ku samayn doonaa. Sidoo kale waxaanu dib u habayn dhamaystiran oo casriya ku samayn doonaa qaybta VIP-da hadday noqoto kuraasta, fadhiyadeeda iyo hareeraheeda iyo dhinac kasta”. Sidaasi waxaa yidhi Cabdiwahaab Maah.
Agaasimaha Waaxda Ciyaaraha ee Wasaaradda Ciyaaraha Maxamed Nuux iyo Gudoomiyaha Xidhiidhka Kubadda Cagta Cabdilaahi, masuuliyiinta ayaa shirkadda TELESOM ugu mahadceliyey dib u casriyeynta ay ku samaynayso goorka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa, waxaa kale oo ay shirkadda uga mahadnaqeen taageeradda joogtadda ah ee la garab-joogto wasaaradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Somaliland.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Dhalinyaradda, Ciyaaraha iyo Dalxiiska Somalialnd Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa shirkadda TELESOM uga mahadnaqay taageeradda joogtadda ah ee ay la garab taagan tahay wasaaradda Dhalinyaradda iyo ciyaaraha, waxaanu yidhi, “Marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa madaxda, masuuliyiinta, dadka saamilayda ah iyo shaqaalaha shirkadda TELESOM ee aanu maanta halkan iskugu nimid in aanu ka cadayno hawsha ay Stadium-ka Hargeysa ka qabanayaan. Waad ogtihiin garoonkani waa garoon qadiima… Dib u casriyeyntiisani waxay ahayd dhawr waji, wajigii kowaad waxay ahayd in rooga la dhigo waana gabo-gabo, qaybta labaadna waxay ahayd in laga qabto dhawr arimood oo kale oo hadhsan. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa TELESOM baaqii aanu u jeedinay siday uga soo jawaabtay ”.
Wasiirka Dhaliyaradda, Ciyaaraha iyo Dalxiiska Somaliland Md. Axmed Cabdi Kaahin ayaa soo gunaanaday xafladan lagu shaacinaayey mashruucan dib u casriyeynta garoonka Hargeysa Stadium ee shirkadda TELESOM maalgalinayso, wasiirka ayaa yidhi, “Waa maalin weyn oo maanta TELESOM oo ah shirkad weyn oo dalkan ka shaqaysaa ay maanta inala joogto oo ay iyaduna ay wax doonayso inay ka qabato , hawlahan ay ka qaban doonaana way sheegeen… Waxaan u mahadnaqayaa TELESOM balanqaadkii ay maalintii hore noo balan qaaday oo ay maanta bilaabayso”. Sidaasi waxaa yidhi Wasiirka Ciyaaraha Md. Axmed Kaahin.